WINE 6.4 inosvitsa kugadzirisa muDTLS protocol uye zvimwe zvinogadziriswa | Linux Vakapindwa muropa
Kana paine chimwe chinhu chiri panguva yakakodzera sekuburitswa kweLinux kernel vhezheni neLinux Torvalds, izvo zviri pasina mubvunzo mavandudziro esoftware ayo anotibvumidza kumhanya nemaWindows application paLinux uye mamwe masisitimu anoshanda. Saka, mushure me v6.3 kubva svondo rapfuura, WineHQ kungotanga WAINI 6.4, kuburitswa kutsva kweavo vanosvika vhiki mbiri dzese vane zvakawanda zvitsva maficha.
Zvikurukuru, WINE 6.4 inosvitsa yakazara makumi matatu nesere kugadziriswa, asi kana tikatarisa pazasi, pavanotsanangudza rumwe ruzivo, tinogona kuona kuti vaita 397 kuchinja. Izvi zviri pamusoro pevhareji hazviwanzo svika mazana matatu shanduko, asi zvakare ichokwadi kuti mavhezheni ekutanga ebudiriro anogamuchira rudo rwakawanda. Pazasi iwe une runyorwa rwemashoko kuti WineHQ yakafunga yakakosha zvakakwana kuti imire kubva kune vamwe vese.
WINE 6.4 inosimbisa
Tsigiro yeiyo DTLS protocol.
Tsamba yakaiswa rutsigiro muDirectWrite.
Dialog yekugadzirisa Yekupinda Kudzora zvinyorwa.
Dingindira rutsigiro rweimwe yakajairika kutonga.
Tsigiro yeKorea Wansung encoding.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.4 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 6.5 uye, kana pasina zvinoshamisa, izvo zvandinotarisira kufambisira mberi izvo zvisingaitike ndichiona kubata nguva kwavanoita muWineHQ, ichasvika munaKurume 26. Pakati pezvauchasuma, chinhu chega chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kugadzirisa sekugara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.4 inounza kuvandudzwa kune DTLS protocol uye mazana ezvakajairika zvigadziriso